Sarimiaina Iray Nandeha Tamin’ny Fahitalavitra Poloney Tany Amin’ny Taona 1970 Manampy Mampiroborobo ny Fampianarana Siansa, ny Teknolojia, ny Injenieria ary ny Matematika Amin’izao Fotoana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Avrily 2017 17:15 GMT
Vakio amin'ny teny Español, हिन्दी, 繁體中文, عربي, Italiano, English
Pomysłowy Dobromir dia andianà sarimiaina iray nalaza novokarin'i Roman Huszczo sy Adam Słodowy tao Polonina nanomboka tamin'ny 1973 hatramin'ny 1975. Dika malalaka amin'ny “Dobromir mahay mamorona”. no lohateny nomena azy. Ny teny hoe pomysłowy dia afaka midika ihany koa hoe marani-tsaina na mahira-tsaina, raha ny anarana Dobromir kosa indray dia avy amin'ny fototeny “dobro” izay midika hoe “tsara” amin'ny fiteny Slavy rehetra.
Manana andiany 20 ilay sarimiaina ho entina mampiroborobo ny fomba fandraisan'ny ankizy ny siansa. Ny andiany tsirairay dia mampivady ny fotokevitra sy ny fampiharana mivantana mifandraika amin'ny siansa, teknolojia, injenieria ary ny matematika, izay maneho ny fomba fampidirana ny fandaharam-pianarana STEM amin'izao fotoana izao.
Tsy dia nanana fahafahana firy loatra i Polonina hanondranany ny kolontsainy satria firenena iray any ambadiky ny lambam-baravarana vy nandritry ny vanimpotoanan'ny Ady Mangatsiaka. Kanefa, ny indostrian'ny sarimiaina tao aminy niezaka ny nandingana ireo sisintanim-pireneny sy ny an'ny vondrona Sovietika, ary lasa nalaza nanerana ny Eoropa Afovoany sy Atsinanana, isan'izany i Yogoslavia tsy niandany tamin'ny atsy sy ny aroa.